Blackmagic Design manambara modely vaovao ho an'ny mpanova micro vaovao | NAB Show News | 3 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Blackmagic Design dia manambara maodely 3G Converter Micro vaovao
Blackmagic Design dia manambara maodely 3G Converter Micro vaovao
Fremont, CA, USA - Alakamisy 19 Novambra 2020 - Blackmagic Design androany dia nanambara fianakaviana vaovao modely Micro Converter 3G izay mamela ny mpanjifa hampiasa HDMI fitaovana miaraka amin'ny rafitra SDI matihanina. Ireo maodely vaovao ireo dia misy fakan-tsary manokana namboarin'i Blackmagic Design ary ampidiro ireo endri-javatra izay tsy hita afa-tsy teo amin'ireo mpanova avo lenta. Ny maodelin'ny Micro Converter 3G dia misy fiasa toa ny 3D LUTs sy endrika horonantsary betsaka kokoa noho ireo maodely antitra nosoloin'izy ireo.
Ny maodely Micro Converter 3G dia misy avy hatrany avy Blackmagic Design mpivarotra am-barotra eran-tany manomboka amin'ny $ 45.
Ny maodely Blackmagic Micro Converter 3G vaovao dia mpanova horonantsary bitika kely kely izay mamela ny mpanjifa hifandray amin'ny mpanjifa HDMI sy fitaovana matihanina SDI. Ny famolavolana henjana sy bitika dia mahatonga azy ireo ho kely hampiasaina amin'ny toerana rehetra. mpanjifa mahazo matihanina 3G, fifandraisana SDI amin'ny fiasa amin'ny SD sy HD endrika hatramin'ny 1080p60. Ireo Micro Converter dia mampiasa USB hahazoana herinaratra, mba hahafahan'izy ireo mandeha amin'ny herinaratra mivantana avy amin'ny fahitalavitra na solosaina finday. Ny mpanjifa aza dia afaka mividy azy ireo tsy misy famatsiana herinaratra raha tsy ilaina izany. Ny Blackmagic Micro Converter ihany no manasongadina fitaovana elektronika namboarina izay mifanaraka amin'ny famaritana maneran-tany ankehitriny, ary azo havaozina amin'ny fenitra vaovao amin'ny ho avy.
Satria avo lenta tokoa izy ireo, ny mpanjifa dia afaka matoky azy ireo amin'ny karazana fampielezam-peo rehetra, velona ny famokarana ary amin'ny fampiasana efa napetraka. Ampiasao izy ireo mba hanovana ny fampirantiana ny solosaina, ny televiziona na ny mpandefa horonantsary ho fanaraha-maso fandefasana kalitao miloko avo lenta. Izy ireo koa dia tonga lafatra amin'ny fanovana ny HDMI fivoahan'ny solosaina sy fakantsary fakantsary ho an'ny fitaovana avo lenta ho an'ny SDI. Alao an-tsaina ny fampiasana fampisehoana an-tsehatra mandeha amin'ny solosaina hahazoana lohateny kalitao avo lenta amin'ny famokarana mivantana. Ny mpanjifa aza dia afaka mampiasa azy ireo mandritra ny fotoana maharitra HDMI ny halavirana mampiasa SDI.
Tsy toy ny mpanova SDI kely hafa, ny Blackmagic Micro Converter dia manasongadina ny haitao avo lenta avo indrindra, namboarina ho fefy vy matanjaka be. Mpanova tsirairay manana indostrialy 3G mahazatra ‑ SDI ary HDMI fifandraisana amin'ireo mpampitohy avo lenta matanjaka. Blackmagic Micro Converter dia misy fifandraisana USB ho an'ny herinaratra, ary koa ny fanovana toe-javatra amin'ny alàlan'ny fampitaovana mpanova amin'ny Mac sy Windows. Satria manome hery ny mpanova ny USB, azon'ny mpanjifa atao aza ny mampiasa herinaratra amin'ny televiziona na solosaina finday. Misy aza ny LED ho an'ny toerana misy ny herinaratra sy ny horonan-tsary. Ny mpanjifa dia afaka mividy Blackmagic Micro Converter ihany koa amin'ny famatsiana herinaratra AC, ao anatin'izany ny adaptatera 4 ho an'ny fampiasana iraisam-pirenena.
Tsy toy ny mpanova mora vidy, ny Blackmagic Micro Converter dia misy ny fanodinana signal avo lenta avo lenta sy ny fantsom-pantsary lalina. Ny Micro Converterers dia novolavolaina tamin'ny fitaovana elektronika mazava tsara ka ny mpanjifa dia mahazo jitter SDI tena ambany, mamela ny mpanjifa hanitatra ny tariby SDI amin'ny halavirana lavitra. Zava-dehibe amin'ny famokarana mivantana izay ahafahan'ny fitaovana toy ny fakan-tsary lavitra lavitra ny mpanova. Blackmagic Micro Converter dia miasa miaraka amina endrika horonan-tsary 8 sy 10 ‑ bit, amin'ny RGB na YUV, ary amin'ny SD sy HD endrika hatramin'ny 1080p60. Manohana ny sarimihetsika 1080p24, 1080p47.95 ary 1080p48 aza izy ireo. Plus ny mpanjifa dia mahazo fanohanana am-peo sy timecode tafiditra tanteraka.
Ny mpanjifa koa dia afaka manova ny toe-javatra ary manavao ny rindranasa mpanova miaraka amin'ny fampiasana mpanova maimaim-poana izay azo sintonina avy amin'ny Blackmagic Design tranokala. Ity rindrambaiko ity dia mifandray amin'ny fifandraisana USB amin'ny Micro Converter sy mandeha amin'ny solosaina Mac sy Windows. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny fampiasana hanovana ny anaran'ny mpanova, izay mety ho ilaina amin'ny famaritana izay mpanova ampiasana ny lahasa izay. Rehefa mampiasa ny mpanova bidirectional, ny mpanjifa dia afaka manamboatra ny laharana fakantsary mihitsy aza, noho izany dia fantatry ny mpanova rehefa voafehy avy amin'ny mpanova famokarana mivantana izy io. Ny mpanjifa dia afaka misafidy koa eo amin'ny haavo A sy ny haavo B amin'ny famoahana horonantsary 3G-SDI.
Ny Micro Converter SDI mankany HDMI Ny maodely 3G aza dia misy 3D LUT ho an'ny fanaraha-maso marina ny loko. Ny mpanjifa dia afaka mampihatra ny fanao manokana, ny loko ary ny fanovana gamma amin'ny fotoana tena izy raha amin'ny fanaraha-maso napetraka. Ny LUTs dia azo ampiharina amin'ny output loop 3G ‑ SDI ihany koa, ahafahan'ny mpanjifa mampiasa ny mpanova ho toy ny processeur 3D LUT. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa 3D LUTs ihany koa mba ahazoana mpanara-maso naoty voadinika amina loko amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso solosaina na fahitalavitra lafo vidy. Ny mpanjifa aza dia afaka mampiasa ny mpandoko loko DaVinci Resolve voalohany hamoronana endrika mahatalanjona ary avy eo tahirizo izy ireo ho toy ny LUT 3D mahazatra. Satria DaVinci Resolve dia azo sintonina maimaim-poana, tsy mandany vola na inona na inona ny manomboka mamorona tontolon'ny 3D LUT ho an'ny fanaraha-maso. Alao an-tsaina ny famerenana ireo tahiry sarimihetsika taloha.
Ilay Micro Converter BiDirectional SDI /HDMI Modely 3G aza manohana fifehezana fakantsary noho izany ny mpanjifa afaka mampiasa fakan-tsary Blackmagic Pocket Cinema Camera miaraka amin'ny switch ATEM SDI. ATEM Switchers dia mandefa fanaraha-maso fakan-tsary amin'ny SDI, ary afaka mandika izany ilay mpanova HDMI ho an'ny fakantsary. Ampifandraiso fotsiny ny SDI avy amin'ny mpanova mankany amin'ny fidiran'ny switch, ny programa switch ho an'ny fidiran'ny mpanova, ary avy eo ny HDMI Ny fahan'ny mpanova dia mifandray amin'ny Pocket Cinema Camera. Manampia nomera fakantsary izao ao amin'ny fampitaovana mpanova ary hahazo ny fanaraha-mason'ny mpanitsy ny lokon'ny fakantsary, ny isa ary koa ny firaketana lavitra. Izy io aza dia miasa mihodina ary ny mpanjifa dia afaka mampifandray sy mifehy fakan-tsary SDI avy amin'ny HDMI switch toy ny ATEM Mini.
Ny maodely Micro Converter 3G vaovao dia mampiasa vaovao Blackmagic Design famolavolana fitaovana manokana ka mandroso kokoa izy ireo mba hanohanana tsara kokoa ireo fiasa ara-teknika manakiana ny fivezivezena avo lenta. Ireo fiasa ireo dia misy ny fanohanana HDMI ary ny fiovan'ny SDI timecode. Ny mpanjifa aza mahazo fanohanana feno amin'ny timecode amin'ny endrika famaritana mahazatra sy ny endrika famaritana avo lenta. Midika izany raha manana ny mpanjifa HDMI fitaovana izay manohana ny timecode, azon'ny mpanjifa atao ny mamadika azy ho SDI ary mahazo io timecode io ho lasa rafitra fandefasana lehibe kokoa.
Blackmagic Micro Converter dia misy ao anaty SDI re ‑ famantaranandro amin'ny vokatra 3G ‑ SDI. Ny famerenana SDI re ‑ dia hamelona indray ny horonantsary SDI, hampihena ny jitter SDI ary hanatsara ny lamina mason'ny SDI alohan'ny handefasan'ny mpanova ny signal amin'ny fitaovana hafa. Io dia mamela ny halavan'ny tariby lava kokoa satria na ny signal SDI efa simba aza dia mbola azo ampiasaina ihany. Ny mpanova hafa matetika dia mamela ireo singa manandanja toy ny famerenana famantaranandro ka tsy azo atokisana amin'ny fampiasana fampielezam-peo. Ny Blackmagic Micro Converter dia manaraka tsara ihany koa SMPTE 259m, SMPTE 292m, SMPTE 296m, SMPTE 424m, SMPTE 425M haavo A sy B, fenitra fandefasana.
Blackmagic Micro Converter 3G modely manohana endrika SDI ao anatin'izany ny 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94 , 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 .2 DCI sy 60Kp2 DCI, 25KPsF2 DCI, 29.97KPsF2 DCI ary 30KPsFXNUMX DCI. HDMI ny fenitra video dia ahitana 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94 ary 1080i60. Plus 3G haavo A sy B no tohana.
Ny maodely Blackmagic Micro Converter 3G vaovao dia mandeha amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB ‑ C iray ihany izay ampiasaina amin'ny solosaina vaovao sy finday avo lenta mba hahafahan'ny mpanjifa manome herinaratra ilay mpanova avy amin'ny fahitalavitra na ny mpanjifa solo-sain'izy ireo. Ny mpanjifa dia afaka mividy Micro Converter ihany koa amin'ny alàlan'ny herinaratra AC izay manohana 100 ka hatramin'ny 240V AC ary miaraka 4 hafa Adapter socket AC mba hahafahan'ny mpanjifa mampiditra azy ireo any amin'ny toeram-pivarotana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Tena mety izany raha manao asa iraisam-pirenena ny mpampiasa. Ny mpanjifa aza dia afaka mampiasa charger finday avo lenta sy fonosana bateria azo averina ampiasaina indray hanamafisana ireo mpanova Micro.
"Malaza be ireo mpanova anay Micro ary ireo maodely vaovao ireo izao dia mampiasa endrika amam-panao izay mitantana ny Blackmagic OS mba hahafahantsika mampiditra endri-javatra maro kokoa noho izay azon'ny maodely taloha ampiasaina satria manan-tsaina ireo maodely vaovao ireo," hoy i Grant Petty, Blackmagic Design PDG. “Heverinay fa ho tian'ny mpanjifa ireo maodely vaovao ireo ary manantena ny hamoaka fanavaozana rindrambaiko vaovao ho azy ireo izahay rehefa manampy endri-javatra vaovao kokoa!”
Famolavolana kely dia kely ho an'ny fandidiana azo entina.
Manohana rindrambaiko fanavaozana amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB.
Ahitana 3D LUT ho an'ny fanaraha-maso ny SDI ka HDMI modely.
Anisan'izany ny fanaraha-maso fakan-tsary ho an'ny Blackmagic ATEM switch.
Manohana 3G-SDI sy HDMI fenitra timecode.
Ahitana ny haitao 3G-SDI miaraka amina famantaranandro SDI re ‑.
Manohana ny fenitry ny horonan-tsary rehetra ao amin'ny NTSC, PAL, 720 HD ary 1080 HD.
Ny maodely dia azo vidiana miaraka na tsy misy famatsiana herinaratra.
Ny maodely Micro Converter 3G dia misy ankehitriny manomboka amin'ny 45 $ US, tsy misy ny haba sy haba any an-toerana, avy any Blackmagic Design mpivarotra manerantany.
Sarin'ny vokatra Micro Models 3G Converter, ary koa ny hafa rehetra Blackmagic Design Vokatra, azo jerena ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
Previous: Teaser "Assassin's Creed Valhalla" Teaser dia miankina amin'ny Blackmagic RAW Workflow
Next: Streamliner Productions no lasa mpiara-miasa miafina xR voalohany any Nouvelle Zélande